Tammy Abraham Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Tammy Abraham Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Tammy'.
Tammy Abraham nke umuaka n'akwukwo ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na ihe omuma ya site na nwata rue oge.
Nyocha nke Chelsea FC Academy Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-atụle Tammy Abraham Biography nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Tammy Abraham Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham na ụbọchị nke abụọ nke ọnwa Ọktoba 2 na Camberwell, United Kingdom site na nne na nna ya, Mr na Mrs Tamaraebi Bakumo.
Nna Tammy Abraham si na Bayelsa State, Nigeria. Ọ kwagara Britain iji setịpụụrụ onwe ya na ezinụlọ ya ọdịnihu dị mma.
Ndụ Tammy malitere ịmalite na bọlbụ football site n'oge ọ bụ nwata. Agbanyeghị, ọ malitere dị ka nwata nwoke na-eme ihe nkiri n'ụlọ akwụkwọ tupu ya etinye aka na bọọlụ (oge niile).
The 6ft 3in kpakpando otu mgbe kwuru, sị:
“M ga-asị na m bụ ezigbo ezigbo onye na-eme ihe nkiri. Enwere m mmasị n'ihe nkiri n'ụlọ akwụkwọ. Nke ahụ bụ ihe, na-abụghị football, na enwere m obi ụtọ ịme Ha ga-enye anyị ihe ma anyị mepụta otu ihe nkiri.
Echetara m ihe nkiri ebe nwatakịrị nwoke kparịrị. O doro anya na abụ m onye mmegbu n'ihi na abụ m nnukwu mmadụ! ”
Tammy Abraham Biography - Mmalite ọrụ:
Abraham sonyeere Chelsea na ọkwa U8 ma nwee ọganihu site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Ọ bụ Chelsea mechara merie mbinye aka ntorobịa ya mgbe nnukwu tussle ya na Arsenal nke bu ulo umuaka nye Tammy.
Ọ hapụrụ Arsenal ka o sonye na Chelsea ka ọ soro Didier Drogba's nzọụkwụ. O zutere oge mbụ na akụkọ ntụrụndụ Africa na ụbọchị mbụ ọ banyere ịbanye na klọb.
Dị ka Tammy si kwuo, "Onye ọkpụkpọ mbụ m bịara gafee bụ Didier Drogba. Echetara m na m na-eje ije na mpụga agụmakwụkwọ na enwere m oyi.
Ọ hụrụ m n’èzí ma kpọpụta m n’ụgbọala ya tụda m n’ala ọzụzụ. Adị m afọ asatọ ma ọ bụ itoolu.
Ozugbo m si n'ụgbọala na-achọ ndị otu m ka m kwuo, 'Nke ahụ bụ Drogba!'ma ahụghị m onye ọ bụla!
Tammy so n'òtù ndị ntorobịa Chelsea nke na-edekọ azụ na mmeri na UEFA Youth League na FA Youth Cup na 2015 na 2016.
Na mbipụta 2016 nke UEFA Youth League, Abraham rutere na nlọghachi nke ihe mgbaru ọsọ asatọ na egwuregwu itoolu, na-eme ya onye nchịkọta goolu nke abụọ kachasị elu.
Ọ buuru ụdị ya banye na iko ndị ntorobịa FA wee wepụta goolu mmeri na mmeri Chelsea meriri Manchester City. N’oge 2014–15 na 2015–16 oge Abraham nwetara goolu 74 n’ime asọmpi 98 gafee asọmpi niile maka otu ndị ntorobịa dị iche iche nke Chelsea.
Formdị ya na ọkwa ndị ntorobịa dọtara uche nke onye njikwa oge Guus Hiddink bụ onye kpọrọ ya ka ọ zụọ ya na ndị isi otu na njedebe nke oge 2015-16.
N'ịchọ inweta oge oge, ọ nara mkpebi mgbazinye ego. Tammy tupu ya enwee nkwanye ego na Bristol City na Swansea.
N'oge ya na onye nke mbụ, ọ meriri ọkpụkpọ klọb nke Oge na Young Player of the Season awards, yana ịbụ onye mgbaru ọsọ ha kachasị elu nwere ihe mgbaru ọsọ 23 na 41 anya.
Tammy Abraham Ezinụlọ:
Onye agha ahụ si n'ezinụlọ dị umeala n'obi na steeti dị na Nigeria nke o si bịa bụ Bayelsa - kpọmkwem Yenagoa. A mụrụ ya na London na nna nna Nigeria na nne Britain bụ ndị na-akwụ ụgwọ n'etiti ụlọ na ndị na-eme ihere.
Ha na-enwe obi ụtọ maka ụmụ ha nwoke abụọ (Tammy na Timmy) ndị na-agba ụkwụ abụọ. Tammy zutere ezigbo ndị nne na nna ya ụgbọala ụgbọ oloko.
N'ezie, nrọ nke ezi nwa ọ bụla bụ ime ka nne na nna ha nwee obi ụtọ !!
Tammy wepụtara ndị nne na nna onyinye ụgbọ ala ọhụụ.
O nwere nwanne nwoke nwoke nke nta, Timmy, onye na-egwuri egwu na usoro agụmakwụkwọ na Fulham dị ka n'oge ederede.
Nwanna Tammy Abraham - Timmy.
Nna ha na-achịkwa ọrụ ha abụọ ugbu a.
Nwanyị Tammy Abraham - Leah Monroe:
Igwe ihe mgbaru ọsọ Swansea dị ugbu a na mmekọrịta dị njọ na enyi nwanyị ya na-ekpo ọkụ aha ya bụ Leah Monroe.
Ụmụaka na-eto eto na-agba agba na akụkọ akụkọ na-abụghị eziokwu
Nwanyị Tammy Abraham - Leah Monroe.
Na agbanyeghị football, Tammy yiri ka ọ na-emeri kwa. N'oge na-adịbeghị anya, ọ gara Instagram iji gosipụta enyi ya nwanyị na-ekpo ọkụ, bụ onye nwere ike ịbụ onye ya na ya na-ekpe ikpe site na emoji mgbaaka na nkọwa.
Tammy Abraham chilitere nwunye ya ka ọ bụrụ Lia Monroe.
Tammy Abraham LifeStyle: Nke a
Tammy hụrụ uwe ndị Africa n'anya. Mgbe ụfọdụ ọ na-akụ ya Ejiji na African ịke. Nke a emeela ka Nigeria chọọ arịrịọ maka Tammy ka ọ kpọọ maka mba ahụ (ala nna ya).
Tammy Abraham Biography - Nkwado England:
Onye isi nlekota ndi otu egwuregwu Naijiria, Amaju Pinnick, kwuru na o nwere ike ikwenye Abraham - onye o kwuru dika "Dị ka nwa nwoke" - iji gbanwee ndị ọ bụla na-egwu England maka Nigeria.
Na mbu, Abraham nke a mụrụ London bụ onye nọ n'oge ahụ na-ezobe ihe mgbaru ọsọ maka Bristol adịghị achịkwa ohere ịnweta Super Eagles.
Jamie Vardy Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Ọ sịrị: "Aghaghị m ịnọgide na-eme nke ọma maka Bristol City maka England na Nigeria kwesịrị ịlụ ọgụ maka m.
Abụ m onye Naijiria nakwa na ọ ga-ekwe omume igwu egwu maka Nigeria. Aghaghị m ilekwasị anya na igwu egwu ebe a na ihe ọ bụla mere, ga-eme. ”
Na 21 September 2017, Pinnick kwuru na Abraham agbanweela nkwado ya na Nigeria. Abraham nyere otu nkwupụta n'otu ụbọchị ahụ ịgọnahụ nkwupụta ahụ ma kwenye na nnweta ya maka nchịkọta England
O wutere Nigeria wee kpebie ịnọ na England n'agbanyeghị na ọ hụrụ nnukwu asọmpi na otu, n'adịghị ka ndị Naijiria.
A ogologo oge enyi Roman Abramovich:
Tammy so n'ime ndị na-agba ọsọ na-eto eto na-ahụ n'anya Roman Abramovich onye na - achọta oge ile egwu egwuregwu ya ka ọ chụrụ ndị ntorobịa Bad n’ebube.
Onye nwe Chelsea kwenyesiri ike na ọ ga-akpọ maka ụmụ okorobịa kasị mma nke Chelsea ka ha gbaa ya. Ma Tammy na Dominic Solanke gụnyere dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Nwa okorobịa Tammy, ndi otu ya na Roman Abramovich.
Tammy Abraham Biography - Ihe mberede ụgbọala:
Na Jenụwarị 2017, Abraham tinyere aka na mberede ụgbọ ala mgbe ọ nọ na Bristol City.
Ihe ọghọm ụgbọ ala Tammy Abraham - Ọnọdụ ahụ.
N'oge ihe mberede ahụ, ọ na-anya ụgbọ ala na-enweghị ikikere ma ọ bụ mkpuchi ya wee kpọọ ya n'ụlọ ikpe n'ihi ya.
Tammy Abraham mere ka ọ gbanwee ugwo olu ya na Chelsea site na ntinye aka na nkwekọrịta Chelsea 50k otu izu tupu ya abanye na Swansea.
Abraham kwadoro nkwekọrịta ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-etinye ihe oyiyi nke onwe ya na-etinye pen na akwụkwọ.
Ehichapụchara post ahụ dị ka nna ya dụrụ ya ọdụ. Dabere na isi mmalite, nkwekọrịta ahụ ga-agbanwe mkparịta ụka ego na Swansea onye na-akwụ ya otu ego k 50k kwa izu.
Obi abụọ adịghị ya, akụkọ ifo Tammy na-ebili yiri nke Marcos Rashford na Anthony Martial.